ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကျေး ရွာတချို့၌ ၂၀၁၄ မေလနှင့် ဇွန် လပိုင်းများတွင် ဖုန်းဖြစ်ဆက်သွယ်၍ ငွေကြေးလိမ်လည်တောင်းခံမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာအများပြည်သူသိရှိ နိုင်စေရန် ရန်ကုန်မြို့ကဟုဆက် သွယ်လာသည့် ကမမောင်မြို့နယ် ခွဲ၊ ကော့ကရက်ကျေးရွာမှဖြစ်စဉ် တစ်ခုကို အသေးစိပ်ဖော်ပြအပ် ပါသည်။
ရန်ကုန်- ဟဲလို ကမမောင်းက နော်။ အေးဟုတ်ပြီ။ အစ်ကိုပြော တာလေးခဏနားထောင်ပေး နော်။အခုဆက်သွယ်တာအရေး ကြီးလို့ ဆက်သွယ်တာနော်။အခု ဆက်သွယ်တာရန်ကုန်မြို့ပြည်တွင်း အခွန်ဦးစီးဌာနက ညီလေးက ဒီ ဖုန်းပိုင်ရှင်လား။
ရွာသား- ဟုတ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါ တယ်။
ရန်ကုန်- အေး၊ ဟုတ်ပြီ။ ညီလေး
သေချာလေးနားထောင်ပေးနော်။ ကိုယ်အခုဆက်သွယ်တာညီလေး ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ ပြည် တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှာ နိုင်ငံတော် အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံ့ငွေရရှိထား တာ ညီလေးသိပြီးပြီလား။ အခု ညီလေးဆီမှာ အစ်ကိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ် ပေါ်လား။ ပေါ်တဲ့နံပါတ်ကို လိုင်း ကြည်မဲ့နေရာလေးက ပြန်ခေါ်ပေး၊ ဒီဖုန်းသံက အရမ်းတိုးနေတယ်၊ ဟုတ်ပြီလား။ အရေးကြီးလို့ အခု ချက်ခြင်းပြန်ခေါ်ပေး။ ဟုတ်ပြီ နော်။
ရွာသား- ဟဲလို ဟဲလို
ရန်ကုန်- ညီလေးကြားရလား၊ အေးညီလေးတို့ဖုန်းနံပါတ်က ၀၉- ၂၅၅၉၂၃၊ ညီလေးတို့က ဒီဖုန်းပိုင်ရှင်နော်
ရန်ကုန်- အေးဟုတ်ပြီ။ ငါ့ညီတို့ တို့နာမည်နဲ့ ငါ့ညီတို့ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ် နဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ ငွေရရှိထားတယ်နော်။ နိုင်ငံတော် ထောက်ပံ့ငွေက ဘယ်လောက်ရ တယ်။ ဘယ်လိုပို့ဆောင်ရမယ်ဆို တာ အစ်ကိုတို့ပြည်တွင်းအခွန်ဦး စီးဌာနရဲ့ ဦးစီးအရာရှိက ရှင်းပြ ပေးမယ်။ ခဏလေး ဖုန်းကိုင်ထား ပေး။
ရွာသား- ဟဲလို ဆရာ ကျွန်တော် ပဲ။
လူကြီး- အခုမင်းကနာမည်ဘယ် သူလဲ၊ မင်းနာမည်
ရွာသား- ဖြိုးကိုကိုလွင်ပါ ဆရာ
လူကြီး- ၂၅၅၉၂၃ က မင်းဖုန်း လား။ ဘာလုပ်လဲ။အလုပ်အကိုင် က
ရွာသား- ကျွန်တော်တို့က ဒီမှာ တော့ ကြုံရာ ကျပန်းပဲပေါ့၊
လူကြီး- ကျပန်း၊ အင်းဟုတ်ပြီ၊ ဒီမှာမင်းနာမည်နဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ငွေရထားတယ်။ မင်းကို အဘတင်ပြပေးမယ်။ သေချာလေးနားထောင်ပေး။ အရေးကြီးလို့မင်းကိုခေါ်တာနော်။ အခုမင်းကိုဆက်သွယ်နေတာ ဘဏ္ဍရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ရုံးချုပ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးက ဆက်သွယ်နေတာနော်။ အဘ နာမည်မှတ်ထားဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးဦးသူရအောင်လို့ခေါ်တယ်။ အေးဒီမှာမင်းတို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ပိုလျှံနေတဲ့ဒီက ဘတ်ဂျက်တွေကို အခု ၂၀၁၄ မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့လမ်း ညွှန်မှုဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ မရှိဆင်းရဲနွမ်းပါး ပပျောက်ရေးဆိုပြီးတော့ ပရော့ ဂျက်အသစ်တစ်ခုချပေးတယ်နော်၊ အဲဒီလိုချပေးတဲ့အထဲမှာ ၂၀၁၃ မှာ ပိုလျှံနေတဲ့ ဘတ်ဂျက်တွေက ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့မဲနှိုက်တော့ မင်း နံပါတ်အပါအ၀င် (၁၅) ဦး မဲ ပေါက်တယ်။ သိလား အေးအဲ့ဒီ (၁၅) ဦးကို ကျန်တဲ့ (၁၄) ဦးက တော့ စီစဉ်ပြီးလို့သူတို့မြို့နယ် အသီးသီးမှာ သူတို့ထောက်ပံ့ချီး မြှင့်ငွေကို ထုတ်ပြီးသွားကြပြီ၊ ခု သားနာမည်နဲ့ပဲကျန်တော့တယ်။ မင်းနာမည်နဲ့ ဒီကနေ့ နေပြည် တော်မှာ ဖောင်စာရင်းပိတ်မယ်လို့ အဘကို ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထား တယ်။ ဒီကနေ့ကို တောင်းခံလွှာ တင်မယ်၊ ဖောင်တင်မယ်။ မင်းနဲ့ အဆက်အသွယ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ဖောင်တင်ပြီးရင် မင်း နေထိုင်ရာမြို့နယ်စီးပွားရေးဘဏ် မှာ မင်းဒီကထောက်ပံ့ချီးမြှင့်ငွေ ထုတ်ယူရမယ်။ ကြားလားနော်။ ထုတ်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မင်း လက်ရှိငွေရရှိမယ့်အပေါ်မှာ ဘယ်လို ရရှိတယ်။ ဘယ်လိုထုတ်ယူရမယ် ဆိုတာကို အဘမင်းကိုပြောပြမယ်။ သေချာနားထောင်ပေး။ ချပေးတဲ့ အခါမှာ သိန်းပေါင်းက စုစုပေါင်း (၄၅၀၀) သိန်း ပိုလျှံတယ်ကြားလား၊ နော်၊ တစ်ဦးချင်းသိန်း (၃၅၀) စီ နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေမဲဖောက်လိုက် တာ မင်းနာမည်နဲ့ သိန်း (၁၅၀) တိတိ ရရှိထားတယ်။ ဒီကနေ့ ပိုင်ဆိုင်မှုရရှိဖို့ရာအတွက် မင်းတို့ မြို့နယ်ကဘာမြို့နယ်လဲ၊
လူကြီး- ကမမောင်းက မြို့နယ် ဆိုပေမယ့်တိုက်နယ်မြို့နယ်လေးဖြစ် နေတယ်။ ဒီသိန်း (၃၅၀) ကို ထုတ်မပေးနိုင်ဘူး။ သိလားနော်။ အဲတော့ ဘားအံမြို့နယ်မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်မှာ ထုတ်ယူဖို့ရာ အတွက် ဒီကနေ့ ၂ နာရီခွဲကို မင်းကိုထုတ်ပေးမှာ ဒီသိန်း (၃၅၀) ထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံတော် သမ်္မတကြီးက ပြဋ္ဌာန်းပါစည်းကမ်း ချက် (၃) ချက်ကို လိုက်နာခိုင်း ထားတာရှိတယ်။ လိုက်နာနိုင်မှ သာလျှင် မင်းကို သိန်း (၃၅၀) ချပေးမှာ (၁၅) ဦးစလုံးလိုက်နာရ တာနော်။ မလိုက်နာဘူးဆိုရင် တော့ ဒီအခွင့်အရေးက ရလာမှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အဲဒါကိုအဘပြော ပြမယ်။ (၁) မင်းဒီအခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရရှိတဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ လျှောက်မပြောရ ဘူး။ မိမိရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကို မိမိကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူရမယ်။ မင်း တို့ ဟိုလျှောက်ပြော ဒီလျှောက် ပြော ပြောနေမယ်ဆိုရင် လူကြီး တွေနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဆွေမျိုးအသိုင်း အ၀ိုင်းတွေရှိတယ်။ လုပ်ငန်းရှင် တွေရှိတယ်။ သူတို့ကျတော့ပေး တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကျတော့မပေး ဘူး။ သူတို့ကျတော့ရတယ်။ ကျွန်မတို့ကျတော့မရဘူး။ အဘ ရုံးကမကောင်းဘူး။ နေပြည်တော် ရုံးကမကောင်းဘူးဆိုပြီး ဖုန်းတွေ နဲ့ ဆက်ပြီး မေးလာတဲ့အခါမှာ မင်းတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီးပေါက်ကြား ရင်ချမပေးဘူး။ ကြားလားနော်။ အဘတို့ဖြေရှင်းရတာ တော်တော် ခက်တယ်။ (၁) အချက်ဘယ်သူ့ မှ လျှောက်မပြောရဘူး။ မင်းအဲဒါ ကတိပေးရမယ်။ မောင်ဖြိုးကိုကို၊ (၂) အချက်ကတော့ မင်းတို့ကို ငွေဖြူအဖြစ်နဲ့ချပေးမယ်၊ နိုင်ငံ တော်သမ္မတကြီးကိုယ်တိုငGP ဖောင်မှာ လက်မှတ်ထိုးပြီး ဂျင်န ရယ်ပါဝါလွှဲပေးမှာ။အဲဒီတော့မင်း တို့က ငွေဖြူအဖြစ်နဲ့ သုံးရမယ်ဆို တော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်း မှန်သမျှကို အခွန်ပေးဆောင်စရာ မလိုဘူး။ ကားဝယ်တင်သွင်းမယ် ဆိုရင်တောင်မှ အမြတ်ခွန်းမပေး ရဘူး။ အိမ်ဝယ်နေမယ်ဆိုလဲအမြတ် ခွန်ပေးစရာမလိုဘူး။ အဲဒီလို အခွန်လွှတ်အောင်မင်းတို့ကိုယ်ပိုင် ငွေကြေးနဲ့ (၉) သိန်းနဲ့ (၅) သောင်း ကျတယ်။ အခွန်ဖိုးငွေတင်ရတယ်။ ဒီသိန်း (၃၅၀) ကို ကိုယ်ပိုင်ငွေ ကြေးနဲ့ (၉) သိန်း (၅) သောင်း ကျပ်တင်ပေးရမှာ ကြားလား။ မင်းတို့က တင်နိုင်တယ်ဆိုရင် သိန်း (၃၅၀) ဒီကနေ့ (၂)နာရီခွဲ ကျရင်လာမယ်။ ဘားအံမြို့နယ် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှာ ထုတ် ယူရမယ်နော်။ပို့ဖို့ကတော့အဘတို့ တာဝန်ယူထားတယ်၊ (၉) သိန်း (၅) သောင်းအခွန်ဆောင်ရမယ် နော်။ ကျန်တဲ့ (၁၄) ဦးလည်း ဆောင်ရတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အတိုင်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် ကျလာမယ်။ မဆောင်ပေးနိုင်ဘူး ဆိုရင်ကျလာမှာမဟုတ်ဘူး။ (၃) အချက်ကသိန်း (၃၅၀) ကိုမင်းတို့ က (၃၅) သိန်းပြန်လည်လှူဒါန်း ပေးရမယ်။ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံ ငွေအဖြစ် မတည်ပေးရမယ်နော်။ အဲတော့မောင်ဖြိုးကိုကိုလွင်အနေ နဲ့ အရေးကြီးတာက ဒီကနေ့ချ ပေးမှာ။ ဒီကနေ့မှာ ငါတို့နေပြည် တော်ကို စာရင်းတင်မယ်။ အခွန် ဖိုးငွေ (၉) သိန်း (၅) သောင်း ဆောင်စရာရှိတယ်။ မင်းကိုယ်ပိုင် ငွေနဲ့ ဆောင်ရမှာ မင်းဆောင်နိုင် မလား။
ရွာသား- ကျွန်တော်မဆောင်နိုင် ပါဘူး။
ကမမောင်းမြို့နယ်အတွင်း ၌ အထက်ပါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီး မောင်ဖြိုးကိုကိုက ငွေကြေးတောင်း ခံလာသူအား ယုံကြည်မှုမရှိသဖြင့် ပြန်လည်ငွေတင်ပို့မှုမပြုခဲ့ဘဲ သတင်းမီဒီယာသို့သတင်းတင်ပို့ ခဲ့သဖြင့် ယင်းဖြစ်စဉ်များကို ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အလားတူမှတ်ပုံတင်နံပါတ်များ၊ ဖုန်းနံပါတ်များကို အသုံးပြုပြီး ပတ်သက်ပိုင်ရှင်များမှာ ထီပေါက် နေကြောင်း၊ ထောက်ပံ့ကြေး ရောက်နေကြောင်း၊ ငွေလွှဲရောက် နေကြောင်း၊ ကံစမ်းမဲပေါက်နေ ကြောင်း၊ လိမ်နည်းအမျိုးမျိုးမရိုး ရအောင်လိမ်လည်လျက်ရှိရာ အယုံလွယ်သူများ သတိထားနိုင် ရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။
1. ဆရာ ကန်တော့ပါ။ ကိုဝန်ရှိရင်ရာသီမလာတော့ဘူးလားဆရာ သိချင်ပါတယ်။
2. ဆရာရှင့် ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့လက္ခဏာတွေထဲမှာ ခြေလက်တွေညောင်းတာမျိုးပါလား။
3. ရာသီမလာခင်တစ်ရက် ကိုယ်ဝန်စစ်တော့ မရှိပါ။ အခု ရာသီလာမဲ့ရက်ထက် သုံးရက်လောက် ကျော်နေပါပြီ။ မစစ်ရဲသေးလို့ပါ။ ကိုယ်က ကိုယ်ဝန်လိုချင်တာဆိုတော့ မရှိရင် ငိုမိမှာစိုးလို့ပါ။ ရင်သားတွေကတော့ အရမ်း နာကျင်ပါတယ်။ အဖြူကလည်း တော်တော်ဆင်းပါတယ်။ အဲဒါ ရာသီနောက်ကျတာပါလားရှင်။
ရာသီလဲမလာ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လဲထင်ရင် ဆီးစစ်ပေမဲ့ အပေါင်းမပြရင် ၂-၃-၄ ရက် စောင့်ပြီး ထပ်စစ်ပါ။ တချို့ဆေးညွှန်းတွေက ၇ ရက်တပတ် စောင့်ခိုင်းတယ်။ ၇ ရက်အကြာ တခါထပ်စစ်လို့ အနုတ် ဖြစ်နေမယ်၊ ရာသီလဲ မလာသေးရင် ဆရာဝန်က စမ်းဘို့ လိုမယ်။ (အာလ်ထွာင်းဆောင်း) ရိုက်ချင်ရိုက်မယ်။
နယ်သာလန်တွင် ငါးနှစ်အတွင်း မောင်းသူမဲ့ ထရပ်ကားများ အသုံးပြုရန် စီစဉ်နေ
Volvo မှ ပထမဦးဆုံး မောင်းသူမဲ့ကားများအား ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိ လမ်းမများပေါ်တွင် စမ်းသပ်မောင်းနှင်နေစဉ်
ဒတ်ခ်ျအာဏာပိုင်များသည် လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ရော့တာဒမ်မြို့နှင့် အခြားမြို့များတွင် မောင်းသူမဲ့ ထရပ်ကားများကို အသုံးပြုရန် စီစဉ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ မောင်းသူမဲ့ ထရပ်ကားများကို ကွန်ပျူတာဖြင့် စမ်းသပ်မောင်းနှင်စေခြင်းအပြင် သီးသန့်လမ်းများပေါ်တွင်လည်း စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
နယ်သာလန်မှ တာဝန်ရှိသူများသည် အများပြည်သူလမ်းမပေါ်တွင် မောင်းသူမဲ့ကားများ စမ်းသပ်ပြေးဆွဲရန် မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကို လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး မီလန်နီရှူဇ့်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အခြေခံအဆောက်အုံဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးသည် လာမည့်နှစ်တွင် မောင်းသူမဲ့ထရပ်ကားများ စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန် ဥပဒေတစ်ရပ် တင်သွင်းသွားမည် ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ မောင်းသူမဲ့ထရပ်ကားများ စမ်းသပ်ရာတွင် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် အတွက် တိကျသည့် လမ်းများနှင့် အခြေအနေများ အနှစ်ချုပ်ကို ဖော်ပြရန် စီစဉ်နေကြောင်း AP သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ ငါးနှစ်စီမံကိန်းကို သုတေသီများနှင့် ကုမ္ပဏီများအပြင် နယ်သာလန် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အာဏာပိုင်များ၊ DAF Trucks ကုမ္ပဏီ၊ ရော့တာဒမ်ဆိပ်ကမ်းနှင့် အသုံးချသိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသနအဖွဲ့အစည်း(TNO) တို့ ပူးပေါင်း၍ လွှတ်တော်အတွင်းသို့ တင်သွင်းထားကြောင်း သိရသည်။
TNO အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် လာမည့်နှစ်တွင် မောင်းသူမဲ့ ထရပ်ကားများကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်ရန် ဆန္ဒရှိနေကြောင်း TNO ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဘတ်ရှန်စ်ခရော့စ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အကြင်နာမဲ့ပြီး ရက်စက်တဲ့ ခင်ပွန်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းတွင်အပ်များစိုက်ဝင်နေရှာသည့် အမျိုးသမီး
အကြင်နာမဲ့ပြီး ရက်စက်တဲ့ ခင်ပွန်းကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ စိုက်ဝင်နေတဲ့
အပ်ကိုးချောင်းကို ခက်ခက်ခဲခဲဖယ်ရှားရတော့မှာပါ။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုက်ခဲနေလို့ ဓာတ်မှန်ရိုက်
ကြည့်တော့မှ အဆိုပါ အပ်တွေကို တွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
မဟာသန္တိသုခကျောင်းတော်ကြီးက သံဃာတော်တွေကို ဇွန် ၁၁ ရက်ညဘက်မှာ
သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကတို့က
ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက သံဃာတော်ငါးပါးကို
သာသနာတော်ညိုးနွမ်းစေမှု ပုဒ်မ-၂၉၅(က)နဲ့ တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ အပေါ်
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးခင်ညွန့်က အဲဒီဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့မှာ
တာဝန်မရှိဘူးလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်က နိုင်ငံတော်ငြိမ်
နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်ရှင်တွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူ ပီနန်ဆရာတော်ကြီးထံ
ရေစက်ချအမျှဝေခဲ့တာပါ။ နိုင်ငံတော် ဝန်ကြီးချုပ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးခင်ညွန့်က မဟာသန္တိသုခကျောင်းတော်ကြီး
ထိန်းသိမ်းခဲ့ခြင်း ကိစ္စနဲပတ်သက်လို့ သူ့မှာတာဝန်မရှိတော့ဘူး။
အခုလက်ရှိအစိုးရမှာပဲ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
”အဲဒါမမေးနဲ့ ကိုယ်လဲမသိဘူး။ လွန်မြောက်သွားပြီလေ။ တို့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူး။
အခုခေတ်က ခေတ်ပြောင်းသွားပြီ၊ တို့ခေတ် မဟုတ်တော့တဲ့အတွက် ဒါကို
ဘာမှမပြောချင်ဘူး။ အဲဒါကိုပြောဖို့လဲ တာဝန်မရှိဘူး။ ပြောရမယ့် အခြေအနေ
မျိုးလည်း မရှိဘူး။ ပြီးသွားပြီ ပြတ်သွားပြီ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း
မပြောဘူး။ အခုဆိုရင် ကုသိုလ်ရေးကိစ္စပဲ လုပ်တယ်။ အကုသိုလ်ကိစ္စမလုပ်ဘူး။
အကုသိုလ်ဖြစ်မယ့်ကိစ္စ မစဉ်းစားဘူး။ နောက် ကိုယ့်မှာ ရန်သူမရှိစေရဘူး။
မိတ်ဆွေတွေပဲ ရှိရမယ်။ အဲဒီခံယူချက်နဲ့ ကိုယ်အခု ဒီ အတိုင်းနေတာပါ”
ဇွန် ၁၁ ရက်က တာမွေမြို့နယ် နတ်ချောင်းရပ်ကွက်မှာတည်ရှိတဲ့ မဟာ
သန္တိသုခကျောင်းတော်ကြီးကို နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ရဲ့
ညွှန်ကြားချက်နဲ့ သာသနာရေးဦးစီးဌာနကနေပြီး ကျောင်းမှာသီတင်းသုံးနေကြတဲ့
သံဃာတော်တွေကို ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများ
ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ တာမွေမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျ ရဲအရာ ရှိကပြောပါတယ်။
”ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဖြစ်တဲ့ညက ကျောင်းတိုက်က ဆရာတော်တွေကို
မေးမြန်းမှုတချို့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လူဝတ်လဲ တာကတော့ ရဲစခန်းမှာမရှိပါဘူး။
ပြီးတော့ တရားမမှုဖြစ်တဲ့အတွက် တရားရုံးကနေ ဖြေရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ ဘယ်သံဃာတော်မှ မရှိပါဘူး”
ပီနန်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒကာများ ဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့သံဃာတော်တွေ
ဆန္ဒပြမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ ထွက် ပေါ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း မဟုတ်မှန်ကြောင်းကို
သရုပ်ဆောင်တွေက ပြောပါတယ်။ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ အခကိစ္စဟာ
နိုင်ငံတော်သံဃ မဟာနာယကရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရ လုပ် ဆောင်ရတာလို့ ဆိုပါတယ်။
တိုင်းအစိုးရတို့ကပါ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ မဟနရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို
လန်ဒန်မြို့ သာသနာ့ရံသီ ဝိဟာရကျောင်းတိုက် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်
ဦးဥတ္တရကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဝတ်လဲပြီး
သာသနာတော်ညစ်နွမ်းစေမှုနဲ့တရားစွဲထားတဲ့အပေါ်မှာ အင်မတန် ထိတ်လန့်
အံသြရတယ်လို့ သာသနာ့ရန်သီ တိုက်အုပ်ဆရာတော် ဦးသိဠိဋ္ဌက မိန့်ကြားပါတယ်။
ယူကေနိုင်ငံမှာ မြန်မာတွေသာမက နိုင်ငံခြားသားတွေကြားမှာပါ ဗုဒ္ဓရဲ့
တရားတော်တွေကို ပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို ခုလို
ပုဒ်မတွေတပ် တရားစွဲတာကိုလည်း မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်ရတယ်လို့ မိန့်ပါတယ်။
“လူဝတ်လဲတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဘုန်းဘုန်းတို့က တအားထိတ်လန့်သွားတာ။
ဘုန်းကြီးတွေအကုန်လုံး ကြားတဲ့ ကိုယ်တော်တွေတိုင်း ထိတ်လန့်တာ။
လူဝတ်လဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က ပါရာဇိကကျမှ ဘုန်းကြီးတွေက လူဝတ်ရတာ။
ဘုန်းဘုန်းတို့ ဝိနည်းနဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီ ဝိနည်းတရားကိုတော့
တအားအံ့သြသွားတာပေါ့နော်။ တကယ်လည်း ထိတ်လန့်သွားတာပေါ့။ တကယ်တော့
ဒီဟာတွေဟာ တိုင်းသူပြည်သားတွေကို ဝိနည်းအမှားတွေကိုပေး၊ ဝိနည်းတွေကို
ဒီလိုဖြစ်စရာအကြောင်း ရှိကို မရှိဘူးပေါ့နော်။”
ဆရာတော်ဦးဥတ္တရကို သံသနာညစ်နွမ်းစေမှု ပုဒ်မ ၂၉၅ (က)၊
သံင်္ဃာ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀/၉၀ စတဲ့ ပုဒ်တွေတပ်ပြီး
တရားစွဲထားတာပါ၊ ဦးဥတ္တရဟာ ယူကေမှာ လူနာတွေကို တရားပြနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့
ပထမဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပြီး လန်ဒန်တော်မြို့တော်က
နာမည်ကြီး St. Thomas’ ဆေးရုံမှာ တရားပြ နှစ်သိမ့်ပေးသူ Chaplain အဖြစ်
ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဥတ္တရနဲ့အတူ လူဝတ်လဲဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့
ဦးပညာစာရတို့ဟာဆိုရင် ယူကေက မြန်မာမိသားစုတွေ စည်းလုံးမှုရှိဖို့
မြန်လူငယ်တွေကို ဘာသာရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း သိရှိသဘောပေါက်အောင်
သင်ကြားပြသပေးတဲ့အကြောင်းကိုလည်း မိခင်တယောက်ဖြစ်သူ မနှင်းနှင်းခိုင်က
“ဘုန်းဘုန်းဦးဥတ္တရ ဦးဆောင်တဲ့၊ ဘုန်းဘုန်းဦးပညာရော ဒီ နှစ်ပါးလုံးက
မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ အနုပညာ တွေကို မပျက်စီးအောင်ဆိုပြီး
ကလေးတွေကို ဗမာစာသင်တာတို့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာသင်တန်းတွေပေးတာတို့ ကျမတို့
အပတ်တိုင်းလိုလိုသွားတယ်။ ဒီက ကလေးတွေဟာဆိုရင် ဘုန်းဘုန်း ဦးဥတ္တရတို့၊
ဦးပညာတို့ သင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ကျမတို့ကလေးတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကဗျာတွေ၊
စာတွေ တော်တော်များများကိုရလို့ ရန်ကုန်ပြန်တဲ့အခါ ကျမတို့ အမေတွေက
ဒီကလေးတွေကို အရမ်းကို အံ့သြပါတယ်။ ဒီကလေးတွေက ဒီမှာမွေးပြီး
ဒီမှာကြီးတာ။ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ပဲ အပေါင်းအသင်းလုပ်လာရတာ။
ဗမာစကားတတ်သွားတဲ့ ကလေးလေးတွေက ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။”
ယူကေနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦဥတ္တရလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ယူကေအစိုးရက
အကူအညီပေးဖို့ ယူကေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို အကူအညီ တောင်းခံထားပြီး
မြန်မာမိသားစုတွေက တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့
“ဗမာမိသားစုတွေအနေနဲ့ ဘုန်းဘုန်းက ဒီ ယူကေနိုင်ငံသား
တစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Foreign Office ကနေတဆင့်
မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ အင်္ဂလန်သံရုံးကနေပြီးတော့ ဘုန်းဘုန်းအတွက် ဘယ်လို
အကူအညီတွေ ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ အမတို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ နောက်တခုက
ဒီမှာ ဗမာမိသားစုတွေ၊ ဘုန်းဘုန်းရဲ့ တကာ၊ တကာမတွေ သိပ်ပေါများပြီး
အားလုံးလည်း စိတ်နှလုံး မချမ်းမသာ ဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့် ညနေတိုင်း
ဘုန်းဘုန်းတို့အတွက်ကို ဘုန်းဘုန်းတို့ စိတ်ချမ်းသာ၊
ကိုယ်ချမ်းသာရှိဖို့ရယ်၊ လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ရယ်ပေါ့ ဒီမှာ မိသားစုတွေ
ဝတ်ပြု ဆုတောင်းပွဲ ညနေတိုင်းပြုလုပ်ဖို့ ဒီမှာ စီစဉ်ထားပါတယ်။”
မဟာသန္တိသုခ ဗုဒ္ဓသာသာနာပြုကျောင်းတိုက်ကို နိုင်ငံတကာမှာ
လှည့်လည်သာသနာပြုနေတဲ့ ပီနန်ဆရာတော် ဦးပညာဝံသ
တည်ထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် နိုင်ငံတော် သံင်္ဃာ့မဟာနာယက အဖွဲ့ကို
လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ပီနန်ဆရာတော် နိုင်ငံခြားကနေ ပြန်ရောက်လာချိန်မှာ
ပီနန်ဆရာတော်နဲ့ သံင်္ဃာ့ မဟာနာယကအဖွဲ့ကြား ကျောင်းတိုက်ပိုင်ဆိုင်မှု
အငြင်းပွားခဲ့ကြပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ ဖြေရှင်းဖို့
စီစဉ်ထားချိန်မှာပဲ သက်ဆိုင်ရာက ကျောင်းတိုက်ထဲကို အချိန်မတော်ကြီး
ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး ချိတ်ပိတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပီနန်ဆရာတော်ကြီး
ဦးပညာဝံသ နဲ့ နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက မဟနအဖွဲ့ကြား
မဟာသန္တိသုခကျောင်းတိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြေအတင်
အငြင်းပွားနေကြတဲ့အချိန် အခုလို အခြေအနေ ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ အခုလို
ကျောင်းတိုက်တွင်း ညဉ့်သန်းခေါင်ယံ ဝင်ရောက် စီးနင်းပြီး သံဃာတွေကို
အင်အားသုံး ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အပေါ် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ဖြေရှင်းပေးဖို့
တောင်းဆိုမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဂျပန်ကို ခေတ္တရောက်နေတဲ့ ပီနန်ဆရာတော်က
“ဓမ္မသတ်အစီအစဉ်ဆိုရင် အကြောင်းကြားရမှာပေါ့။ အခုအတိုင်းကတော့ စိတ်ကောင်း၊
စေတနာကောင်းနဲ့ လုပ်ပေးတယ်။ အခု ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ တစ်ခုတော့ရှိတယ်
သံဃာ့နာယကက သူတို့က ဓမ္မစက်တဲ့၊ အစိုးရက အာဏာစက်တဲ့။ ဓမ္မစက်က မြင့်တယ်တဲ့။
သံဃာ့နာယကက လုပ်ချင်တာလုပ်တဲ့။ သူတို့ကို ဘယ်သူမှ တရားမစွဲနိုင်ဘူးတဲ့။
ဘုန်းကြီးတို့က သူတို့ကို ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ သူတို့လုပ်တာ ဘုန်းကြီးတို့
ကြည့်ရဦးမယ်။ သူတို့လုပ်တာမျိုးတော့ ဘုန်းကြီးတို့က အာဏာရှိတဲ့လူတော့
မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ သူတို့လုပ်တာကို ကြည့်ပြီးတော့ နောက်ဘုန်းကြီးတို့က
လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကို လောကကြီးမှာ လုပ်စရာတွေ အများကြီးပါပဲလို့
ပီနန်ဆရာတော် မြန်မာပြည်ကို ပြန်ကြွလာချိန်မှာလည်း
ကျောင်းပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းကြဖို့ စီစဉ်ထားချိန်မှာ
အခုလို အင်အားသုံး ဝင်စီးနင်းခဲ့တဲ့ ကိစ္စအပေါ် ပီနန်ဆရာတော်က စိတ်မသက်မသာ
“အခုဘုန်းကြီးတို့က နိုင်ငံခြားသွားတဲ့ အခါကျတော့မှ သူတို့က အခုလို
ကျောင်းကို စစ်တပ်လို၊ Terrorist တွေလို၊ ဓားပြတိုက်သလို၊ တခါတည်း
၀င်တိုက်ပြီးတော့ လူကြားမကောင်း၊ သူကြားမကောင်း သူတော်ကောင်းတွေရဲ့
စိတ်နှလုံး မသာယာအောင်လုပ်တဲ့ အဲဒီသံဃာ့နာယကဆိုတော့
စဉ်းသာစဉ်းစားကြည့်တော့။ နာမည်နဲ့ သူတို့ သံဃာ့နာယကခိုင်းလို့
သာသနာရေးဌာနက လုပ်ရပါတယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒီတော့ သံဃာ့နာယကကလည်း
ခိုင်းလို့၊ တိုင်းသံဃာ့နာယက ကလည်း လုပ်ရတယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒီတော့
ဘုန်းကြီးတွေမှာ ၀ါးရင်းတုတ်တွေလည်း ပါလာတယ်တဲ့။ Walkie Talkie တွေလည်း
ပါလာတယ်ဆိုတော့ ဘုန်းကြီးတွေကလည်း အခုနကလို Terrorist တွေလို ဖြစ်နေတယ်။
အဲဒီမှာလည်း စစ်တပ်ရော၊ ခုနက ရဲရော၊ သာသနာရေးဌာနရော ပါတယ်လို့ပြောတော့
မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီဟာ ဒီကနေ့ မဟာသန္တိသုခကျောင်းကို အကြမ်းပတမ်း
၀င်စီးခြင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီသွားတဲ့ နမူနာလား၊
ပြယုဂ်လား၊ example လားဆိုတာ အားလုံး သဘောပေါက်ဖို့ လိုတယ်လို့
ဘုန်းကြီးကတော့ အဲဒီလိုလည်း ထင်တယ်လေ။”
ဂျပန်နိုင်ငံကို ခေတ္တရောက်နေတဲ့ ပီနန်ဆရာတော် ဘုရားကြီးအနေနဲ့
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကို ပြန်လည်ကြွရောက်မှာဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ
သံဃာ့မဟာနယကအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း
Ref; VOA, BBC, RFA, online news
အိမ်များဆီကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ရေပိုက်လိုင်း က ရွှေတွေ ထွက်လာလို့ ဒေသခံတွေ အံ့အားသင့်ခဲ့ကြ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ မွန်တာနာအရပ် ဒေသမှာ နေထိုင်တဲ့ သူတွေဟာ ရေပိုက်လိုင်းက နေရွှေတွေ ထွက်လာတဲ့ ဖြစ်ရပ် အပေါ် အံ့အားသင့် နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီ ဖြစ်ရပ်ကို သတိထားမိတဲ့ သူကတော့ ရှာရွန်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ တစ်နေ့မှာ အိမ်မှာ ရှိတဲ့ ရေပိုက်ခေါင်းကို ဖွင့်နေစဉ်မှာ မသင်္ကာစရာတွေ ကို တွေ့မြင်ခဲ့ ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ရေမှာ အမှုန်အမွှားတွေ ပါဝင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ မာ့ခ်ဘရောင်းကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်သူတို့ နှစ်ဦးဟာ အမှုန်အမွှားတွေကို စစ်ထုတ်ပြီး စမ်းသပ်မှုတွေ ပြုလုပ် ခဲ့တဲ့အခါမှာ ရွှေအစစ်တွေ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
မာ့ခ်ဘရောင်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ ဇနီးဟာ ရေပိုက်ကိုဖွင့်စဉ်မှာ အမှုန်တွေ တွေ့ခဲ့ရပါ တယ်။ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့က ရွှေလို့ထင်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စမ်းသပ်တဲ့ အခါမှာ ရွှေအစစ်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ကျွန်တော် မရှင်းပြတတ် တော့ပါဘူး လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ မာ့ခ်ဘရောင်းရဲ့ အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်သူ ပေါလ်ဟာပါကလည်း ရေသောက်ဖို့ပြင်တဲ့ အခါ ရွှေတွေကို တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒေသခံတွေဟာ ရေ ပိုက်လိုင်းမှာ ရွှေမှုန်တွေပါဝင်နေခြင်းအ ပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေကြပါတယ်။ ဒီဒေသနဲ့ (၅)မိုင်သာ ကွာဝေးတဲ့ နေရာမှာ ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ရွှေတွေဟာ အဲဒီကနေတစ်ဆင့် ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ယူဆနေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ ကတော့ ရွှေတွေဟာ ရေပိုက်လိုင်း အတွင်းကို ရောက်လာဖွယ် လုံးဝမရှိဘူး လို့ ငြင်းချက်ထုတ်ထားကြပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ စမ်းသပ် စစ်ဆေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မူးဝေခြင်းအတွက် အိမ်တွင် လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ သက်သာစေသော နည်းလမ်းများ
Vertigo လို့ခေါ်တဲ့ မူးဝေခြင်းကို ခံစားရမယ်ဆိုရင် ခံရသူဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ချာချာလည်နေခြင်း၊ ဟန်ချက်မထိန်းနိုင်ခြင်းတွေကို ခံစားရပြီး အော့အန်ခြင်းတွေကိုပါ ရုတ်တရက်ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ နားရဲ့အတွင်းဖက်ပိုင်းက semi-circular လမ်းကြောင်းငယ် မှာ ပြဿနာရှိနေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- အတွင်းနားမှာ လွင့်မျောနေသည့် ကယ်လစီယမ်ကာဘွန်နိတ်ပုံဆောင်ခဲငယ်များပိတ်ဆို့နေခြင်း
- နားတွင်းပိုးဝင်မှု ဖြစ်ပွားခြင်း
- သွေးအားနည်းခြင်း၊ ဦးနှောက်သို့ သွေးလှည့်ပတ်မှု မလုံလောက်ခြင်း
- သွေးတိုးခြင်း၊ ကိုလက်စတီရောများ ခြင်း၊ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ
-ရေဓာတ်နည်းပါးခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း စသဖြင့် အကြောင်းအရာပေါင်းများစွာရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာအနေ နဲ့မူးဝေခြင်းကရှိနေပါတယ်။
ဇီးဖြူသီးအမှုန့် လက်ဖက် ဇွန်း သုံးဇွန်းကို ရေနဲ့ရောပါ။အဲဒီ နောက်နံနံစေ့မှုန့်တစ်ဇွန်း ထပ်ပေါင်း ပါ။ သကြားဇွန်းဝက်ခန့် ထည့်ပြီး ညစဉ်ဖျော်သောက်ပေးပါ။
ကိုယ်ခန္ဓာကို ဖြေလျော့ထား ပါ။ ပြီးရင်အိပ်ပျော်အောင် ကြိုးစားပါ။ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ အိပ်ချိန် နည်းပါးခြင်းဟာခေါင်းမူးခြင်း၊ ခေါင်း အုံခြင်းတွေနဲ့ပျို့အန်ခြင်းတွေကို ဖြစ် စေပါတယ်။
သစ်သီးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကို ကြိတ်ချထားတဲ့ သောက်စရာတွေကို သောက်သုံးပေးရင် ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးလို့ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းမူးခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ွှ
အမြန်စာ (fast food)၊ အလွယ်စာတွေကို စားခြင်းကို ရှောင်ပါ။ အိပ်ယာထဲမှာ တစ်ဖက်ပဲစောင်း ပြီး အိပ်ခြင်းဟာ ဟန်ချက်ကို ထိန်းနိုင်ခြင်းကို လျော့ပါးစေပြီး ခေါင်းမူး စေနိုင်ပါတယ်။
-စတော်ဘယ်ရီသီးများကို ကြိတ်ချေပါ။ ပြီးရင် ဒိန်ချဉ်နဲ့ရောပါ။ နေ့စဉ် သောက်ပေးရင် ခေါင်းမူးခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
ချင်း(ဂျင်း) လက်တစ်ဆစ်ခန့် ကို လက်ဖက်ရည်ကြမ်းထဲမှာ ထည့် ပြီးသောက်ပေးပါ။ မသောက်လိုရင် ၀ါးစားပေးပါ။ ဒါဆိုရင် သွေးပေါင်ချိန် တက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့အန်လိုခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
မက်မန်းသီး (almonds) အနည်းငယ်ကို ကြိတ်ချေပြီး နို့ပူပူ တစ်ခွက်နဲ့ ရောပါ။ သောက်သုံးပေး ရင်စွမ်းအင်ပြည့်ဝစေတဲ့အပြင် ခေါင်းမူးခြင်းကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။
ပျို့အန်ပြီး ခေါင်းမူးတာမျိုးဆိုရင်တော့ ဆားအနည်းငယ်၊ ငရုတ် ကောင်းစေ့အနည်းငယ်ကို လိမ္မော်ဖျော်ရည်တစ်ဖန်ခွက်နဲ့ရောသောက် ပါ။ ပျို့အန်တာတွေ လုံးဝသက်သာ သွားပါလိမ့်မယ်။
credit to >>>Health Updates Journal
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်းဘူးခရိုင်း ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ကုန်းဇောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ဘာသာခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ယောကျာင်္းဖြစ်သူဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးနှင့် ယင်း၏သားအရင်းဖြစ်သူ(အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဟု ယူဆရသူ)တို့ နှစ်ဦး
ဘာသာရေးကိစ္စအငြင်းပွားပြီး ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှ ဘာသာရေအသွင်ဆောင်သော အဓိကရုဏ်းတစ်ခု
အဆိုပါကျေးရွာအုပ်စု အေးတန်းရပ်ကွက်တွင် ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီခန့်တွင် စတင်ဖြစ်ပွားကြောင်း မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဇာကရီယာဘိုင်က ဇွန်လ၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားသည်။
“အခုတော့ပြီးသွားပါပြီ၊ ဖြစ်တဲ့ကလေးရဲ့အမေက မွတ်စလင်ဘာသာဝင်ပါ၊ သူတို့မှာ
သားသုံးယောက်ရှိပါတယ်၊ နှစ်ယောက်ကတော့ မွတ်စလင်ဘာသာကိုးကွယ်ပါတယ်၊
တစ်ယောက်ကတော့ အတိအကျမဖြစ်သေးပါဘူး၊ အဲ့ဒီကလေးနဲ့ သူတို့အဖေအရင်းဖြစ်သူ
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူနဲ့ ဘာသာရေးအကြောင်း အငြင်းအခုံဖြစ်ပြီး ရန်ဖြစ်ကြပါတယ်၊
ဒါကို ကျေးရွာအုပ်စုက တချို့လူတွေက တမျိုးမြင်ပြီး ဒီလိုအဓိကရုဏ်းဖြစ်သွားရတာပါ” ဟု ယင်းကပြောဆိုသည်။
“ရန်ဖြစ်ပြီး အများသုံးဓမ္မာရုံးရှေ့ရှိ ရေအိုးစင်မှ ရေအိုးကို
ရိုက်ခွဲခဲ့ပါတယ်၊ ဒါ့ပြင် ဘာသာရေးစုရုံးလုပ်နေတဲ့ အိမ်တစ်လုံးကို
အဓိက ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီအိမ်ထဲမှာ ဗလီလို့ယူဆရတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့
ဓာတ်ဆီများစွာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်” ဟု ယင်းဒေသခံ ကျောင်းဆရာတစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်များကြောင့် ပွင့်ဖြူမြို့နှင့်နီးစပ်သော မြို့နယ်များတွင်
လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားကြောင်းလည်း သိရသည်။ အဖြစ်အပျက်အားလုံးကို
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ ဖုန်းကိုင်သော်လည်း ပြန်လည်းမဖြေကြားခဲ့ပေ။
အဆိုပါဒေသသည် လွန်ခဲ့သော ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဆင်ဖြူကျွန်းမြို့မှ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကို ဘာသာခြားသုံးဦးက
ကာမရယူခဲ့ပြီး ကားပေါ်မှကန်ချထားမှုဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဒေသခံပြည်သူများအနေဖြင့် ယင်းဒေသတွင် ဘာသာခြားအဆောက်အဦးများကို ဆက်လက်ဆောက်လုပ်ခွင့်
မပေးဘဲ စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအရ သိရသည်။
ကော့သောင်းမြို့ ယနေ့ နံနက်စောစောမီး ကျပ် ၃၅ သိန်းခန့် ဆုံးရှုံး
ကော့သောင်းမြို့ တွင် ယနေ့ နံနက် ၉း၅၀ အချိန်က မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာငွေကျပ် ၃၅ သိန်းခန့် ဆုံးရှုံးကြောင်းကော့သောင်းမီးသတ်ဌာနမှသိရ သည်။ကော့ေ သာင်းမြို့ ၊ပိေ တာက်ရွှေဝါရပ်ကွက် ၊မြရည်ပုလဲလမ်း၊ရှိအိမ်အမှတ်—တွင်မီးဖိုမီးကျွင်းမီးကျန်မှစတင်ကာမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဆုံးရှုံမှုတန်ဖိုးမှ ကျပ်(၃၅)သိန်း ခန့်ရှိကြော င်းကော့သောင်းမီးသတ်ဌာနမှသိရသည်။
အဆိုပါမီးငြှိမ်းသက်ရာတွင်ကော့သောင်းမြို့ နယ်မီးသတ်ဌာနမှကားတစ်စီးနှင့်ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သားများက ၀ိုင်းဝန်းကာမီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရကြောင်း မျက်မြင်သက်သေ တစ်ဦး၏ပြောပြချက်အရသိရသည်။“ကျွန်တော်ကကလေးအကြီးကိုကျောင်းသွားပို့ ပြီးမိန်းမကိုဈေးကသွားကြိုတာပုလဲလမ်းမှာမီးလောင်တယ်ကြား လို့ ပြောတော့မှ ကျွန်တော့် အိမ်ကတစ်ဝက်လောက်လောင်ပြီးနေပြီ”ဟုအိမ်ရှင်ဖြစ်သူဦးသိန်းထွန်းကပြောသည်။ အဆိုပါ မီးလောင်မှုမှာမီးသတ်ဌာနမှ မီးအားနံနက် (၁၀း၁၀)တွင် မီး ထိန်းနိုင် ခဲ့ပြီး နံနက်(၁၁း၀၀)အချိန်တွင်မီးငြှိမ်း နိုင်ခဲ့ကြောင်းကော့သောင်းမီးသတ်ဌာမှသိရသည်။မီးလောင်မှုကြောင့်အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ (- )အားပုဒ်မ(၂၈၅)အရအရေးယူ ထားကြောင်းကော့သောင်းမီးသတ်ဌာနမှသိရသည်
ဖိလစ်ပိုင်တွင် အင်တာနက်ပြစ်မှု ဥပဒေအရ အမျိုးသမီး တစ်ဦးအား တရားစွဲဆို ဖိလစ်ပိုင်တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အင်တာနက်ပြစ်မှု ဥပဒေအရ အမျိုးသမီး တစ်ဦးမှာ ပထမဆုံး တရားစွဲ ဆိုခံရသူ ဖြစ်လာကြောင်း သိရသည်။
ကာလာမာတီနက်ဇ် အစ်ဂနာစီယိုဟု ခေါ်သည့် ထိုအမျိုးသမီးသည် ကွန်ပျူတာ ဒေတာများကို ခိုးယူပြီး ၎င်း၏ ဘဏ်စာရင်းထဲသို့ ဒေါ်လာငွေထောင်နှင့် ချီ၍ လွှဲပြောင်း ထည့်သွင်းခဲ့မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ခဲ့ရကာ ထောင်ဒဏ် ခြောက်နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရဖွယ် ရှိနေသည်ဟု ဖိလစ်ပိုင် တရားရေးဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။
၎င်းကို မနီလာမြို့ပြင်ရှိ လတ်စ်ပီနာမြို့တွင် အစိုးရ ရှေ့နေတစ်ဦ်းက တရားစွဲဆို ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဖီလစ်ပိုင် အင်တာနက်ပြစ်မှု တားဆီးရေး ဥပဒေပုဒ်မဖြင့် တရားစွဲဆိုထား သည်။ ဖိလစ်ပိုင်၏ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ထိုဥပဒေတွင် အင်တာနက်မှ စာရင်းအင်း နှင့် ဘဏ်ကတ်များကို ခိုးယူမှု၊ ကလေးသူငယ် ညစ်ညမ်း ရုပ်ပုံများဖြင့် လွှင့်တင်မှု အပါအ၀င် ပြစ်မှုများကို သတ်မှတ် ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် ဝေဖန်သူများက ထိုဥပဒေမှာ အစိုးရနှင့် သဘောထား ကွဲလွဲသည့် အတိုက်အခံများကို လည်း ဥပဒေ အကြောင်းပြ၍ နှိပ်ကွပ်နိုင်သည့် အတွက် ဝေဖန်နေကြသည်။
ထိုဥပဒေကို ၂၀၁၂ တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော် လည်း အတိုက်အခံများ၏ ကန့်ကွက်မှုများ ပြင်းထန်ခဲ့ပြီး ကြန့်ကြာခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီတွင် အခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ တရားရုံးက ထိုဥပဒေမှာ အခြေခံဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ အတည် ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် တရားရုံးသည် အာဏာပိုင်များအား ၀က်ဘ်ဆိုက်များကို ပိတ်ပင်ခွင့်နှင့် အင်တာနက် အသုံးပြုနှုန်း များကို ထိန်းချုပ်ခွင့် တို့ကိုမူ ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။
"ကလေးငယ်ကို ဆေးတိုက်လိုက်ရင် အဖျားက ကျသွားပေမယ့် ပြီးရင် ပြန်တက် လာတာပဲ ဆရာ"လို့ ကလေးမိဘအ တော်များများက ပြောတတ်ကြတယ်။ ဒါအမှန်ပါပဲ၊ ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်နေမှာပဲ။ ကလေးကို ပါရာစီတမောတိုက်ရင် ဆေး ရဲ့ အာနိသင်က ငါးနာရီ၊ ခြောက်နာရီ လောက်ပဲ ခံပါတယ်။ ဆေးအာနိသင် ကုန်သွားရင် အဖျားက ပြန်တက်လာပါ တယ်။ နောက်တစ်ခါ ဆေးပြန်တိုက် လိုက်ရင် ကလေးက အဖျားပြန်ကျသွား ပြန်ရော။ အဲဒါက ဝင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး အ မျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး(ဥပမာ တစ်ရက် ဖျားမှာလား၊ သုံးရက်ဖျား မှာလား) အဖျား ကျတာ၊ မကျတာက အရေးမကြီးဘူး။ ကလေးကို ဘာပိုးဝင်ပြီး ဘယ်လိုဒုက္ခပေး နိုင်သလဲဆိုတာက ပိုအရေးကြီး ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီပိုင်မြေတူးစက် များမှ ဘက်ထရီအိုးများပျောက် ဆုံးခဲ့၍ ဒေသခံများစုပေါင်းပြီး ပြန်လျော်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ချက် ကို ဒေသခံများမကျေနပ်ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ မြောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ ၁ဝနှစ်သား အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ အထက်တန်းကျောင်းကနေ ဒီပလိုမာဘွဲ့ရရှိခဲ့တယ် လို့ AP သတင်းဌာနက ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းမှ ယင်း၁ဝနှစ်သားအရွယ်ကောင်လေး ကတော့ ဒီပလိုမာဘွဲ့ရရှိခဲ့လို့ အခမ်းအနား ပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ¤င်း ၁ဝနှစ်သား ကောင်လေးဟာ Tanishq Abraham လို့ အမည်ရှိပြီး အထက်တန်းကျောင်းမှ အသက် ငယ်ရွယ်ဆုံး ဘွဲ့ရရှိသူတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါ တယ်။
၁ဝနှစ်သားအရွယ်သာရှိသော်လည်း အထက်တန်းကျောင်းကနေ ထူးထူးချွန်ချွန် ဒီပလိုမာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့လို့ အိမ်ဖြူတော်ကနေ တောင်မှ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတဲ့စာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
''ကျွန်တော့်ရဲ့ဦးနှောက်က Topic တွေကို နှုတ်တိုက်ကျက်လာခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော် ဘာတစ်ခုကိုမှ အတိအကျ မသိပါဘူး''လို့ Tanishq က ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဘက်လိုက်မှုရှိဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
ဓာတ်ပုံ – အန်အယ်လ်ဒီ
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ ဘက်လိုက်မှုရှိတယ်လို့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုလိုက်ပြီး နောက်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲမပေးရသေးခင် စစ်တပ်ကို ပြောဆိုထားတဲ့စကားကို ပြင်ဆင်ပြောဆိုဖို့ သတိပေးချက်တွေကို ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မ ရှင်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘက်မလိုက် ကြားအနေဆုံးထဲက တခုမဟုတ် ဘူးလို့ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က ၄ ရက်ကြာ နီပေါနိုင်ငံ ခရီးစဉ် အပြီး မှာ ပြောပါတယ်။
“ကျမ သို့မဟုတ် တခြားခေါင်းဆောင်တွေကို ဘာတွေကို ပြောသင့်တယ်၊ ဘာတွေတော့ မပြောသင့်ဘူး ဆိုပြီး သတိပေးတာဟာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ အလုပ် မဟုတ်ဘူး” လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ခတ္တမန္ဒူမြို့တော်မှာ ပြောသွားပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ၂ နှစ်ကြာ သက်တမ်းရှိလာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ စစ်တပ်က ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေးအတွက် စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်သူလူထုကို ဟောပြောခဲ့တဲ့ စစ်တပ်ကို စိန်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ လွှတ်တော်နေရာ ၄ ပုံ ၁ ပုံကို ရွေးကောက်ခံ မဟုတ်တဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကို နေရာပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။